विज्ञान जानकारी | Ratopati
'ग्लोबल वार्मिंग'ले जल प्रलय निम्त्याउँछ अथवा पृथ्वीलाई मरुभूमिमा परिणत गर्छ ? access_timeपुस १५, २०७७
तपाईंहरुले 'ग्लोबल वार्मिंग'का बारेमा सुन्नु नै भएको होला। साथै यो पनि सुन्नु भएको होला 'ग्लोबल वार्मिंग'का कारण ध्रुवहरुमा जमेर रहेको हिउँ पग्लिएर समुद्रको जलस्तर बढ़न गई संसारका धेरै शहर जलमग्न हुन्छन्। ठुलाठूला वैज्ञानिक...
विज्ञानसम्बन्धी जानकारी : किन र कसरी ? access_timeकात्तिक २९, २०७७
पानीमुनि ताली बजाउँदा किन सुनिँदैन ? मैले पनि यसको प्रयास गरेको छु र यो कुरासँग म सहमत छु । साँचिक्कै टाउकोलाई पानीमुनि राखेर सुन्दा पानीमुनि ताली बजाउँदा ठूलो आवाज आउँदैन । तैपनि पानीमुनि नै दुईवटा ढुँगालाई हिर्काउने हो भने निकै ठूलो आवाज...
मान्छेले ढाँटेको पत्ता लगाउने मेशिन ! access_timeकात्तिक २३, २०७७
कुनै मान्छेले अपराध गर्यो । अपराध गरेको कारण ऊ पक्राउमा प¥यो । उसलाई प्रहरीले केरकार गर्दा उसले आफूले अपराध गरेकै हैन भनी ढाँट्यो । त्यो मान्छेलाई अनेक डर, धम्की देखाइयो, लोभ लालच र प्रलोभन दिइयो, तै पनि उसले आफूले अपराध गरेको कुरा स्वीकार...
खानाको स्वाद कसरी थाहा पाइन्छ ? access_timeभदौ ३, २०७७
स्वादिष्ट भोजन सबैलाई मनपर्ने हुन्छ । तर कसैलाई एउटा स्वाद मनपर्छ भने कसैलाई अर्को । गुलियो मनपर्ने, पिरो मन नपर्नेहरु पनि छन् । यसको उल्टो पिरो मनपर्ने गुलियो मन नपर्नेहरु पनि छन् । विभिन्न खानाको स्वाद हुन्छ । तर प्राथमिक स्वादहरु जम्मा चार प्रकारका मात्र हुन्...
शनिको सौन्दर्य access_timeसाउन १८, २०७७
हिन्दू धार्मिक आस्थामा शनि कोपको देउता हो । यो देउताको कोप परेपछि मानिसलाई दशा लाग्छ । रोमन मिथकमा चाहिँ शनि धनसम्पत्ति र कृषिको देउता मानिन्छ । विश्वास आस्थाहरुले शनिलाई देउता मानेपनि विज्ञानको आँखामा शनि हाम्रो सौर्यमण्डलको एउटा ग्रह मात्रै हो । सौर्यमण्...
प्राचीन कालमा सर्पहरुको पनि खुट्टा access_timeअसार २४, २०७७
साँचिक्कै होस् वा टिभी वा पत्रिकामा होस्, प्रायः हामी सबैले सर्प देखेका छौं । सर्प घस्रने जीवहरुको स्कुआमाटा (squamata) वर्ग अन्तर्गत पर्छ । त्यसको शरिरमा पत्रै–पत्र भएको छाला हुन्छ, जसलाई स्केल (scale) भनिन्छ । तिनीहरु छेपारोबाट विकास भएको वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ ।...
डायनोसोरभन्दा पुरानो उभयचर प्राणी access_timeअसार १९, २०७७
उभयचर प्राणीहरु यस संसारमा करोडौँ वर्ष पहिलेदेखि बस्दै आएका छन् । उनीहरु भीमकाय डायनोसोरको पालोभन्दा पनि अघिदेखि यहाँ बस्दै आएका हुन् । उनीहरुको उत्पत्ति करिब ४१ करोड वर्ष पहिले माछाबाट भएको हो । मेरुदण्ड भएको जमिनमा बस्ने पहिलो प्राणीको रुपमा उभयचर प्राणीलाई नै मान...
इल माछा, जसको करेन्टले मान्छेलाई नै मार्न सक्छ ! access_timeफागुन १५, २०७६
पृथ्वीको दुई तिहाई भाग पानीले ढाकिएको छ । यो कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर त्यो पानीले ढाकिएको विशाल क्षेत्रभित्र अनन्त रहस्यहरु लुकेर रहेका छन् । आजसम्म ती रहस्यहरुमध्ये मानिसले कमै मात्र थाहा पाएका छन्, पत्ता लगाएका छन् । तर पत्ता लगाएका कुराहरुमा पन...
आँखा पोल्ने र बर्बरी आँसु झार्ने ग्याँस access_timeमाघ १९, २०७६
२०४६ सालको आन्दोलनको बेलाको घटना हो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तको माग गर्दै जुलुस काठमाण्डौको रत्नपार्कमा अगाडि बढिरहेको थियो । बागबजारमा पुलिसको ठुलै जमात खडा थियो । अचानक “डुंग” ‘गोली पड्केकोÚ आवाज आयो । जुलुसमा सहभागी सबै झस्के । त्यत्त...
युद्धमा सन्देश पठाउने, विज्ञानमा पनि उपयोगी साबित चङ्गाको कुरा access_timeकात्तिक ५, २०७६
हिन्दू धर्म मान्नेहरुको महान् चाँड दशैँ पनि भरखरै सकियो । दशैँभन्ने बित्तिकै हामी नयाँ लुगा र मिठो खानेकुरा सम्झिहाल्छौँ । दशैँमा साँच्चै नै निकै रमाइलो हुने गर्छ । टाढा भएका आफन्तहरुलाई भेट्न पाउँदा त झन खुसीको सीमा नै रहँदैन । दशैँमा हामी चंगा पनि खुब उडाउने गर्छ...